बाइबलका कथाहरू: सबैभन्दा बलियो मान्छे - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
संसारको सबैभन्दा बलियो मान्छेको नाउँ के हो, तिमीलाई थाह छ? उसको नाउँ शिमशोन हो। ऊ इस्राएलको न्यायकर्ता थियो। तर शिमशोनलाई यहोवाले बलियो बनाउनुभएको थियो। शिमशोन जन्मिनुअघि नै यहोवाले उसकी आमालाई यसो भन्नुभएको थियो: ‘चाँडै तिमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। उसले इस्राएलीहरूलाई पलिश्तीहरूको हातबाट बचाउनेछ।’
पलिश्तीहरू कनानमा बस्ने खराब मान्छेहरू हुन्। उनीहरूसित थुप्रै लडाकू छन्। पलिश्तीहरूले इस्राएलीहरूलाई धेरै दुःख दिन्छन्। एकदिन शिमशोन पलिश्तीहरू बस्ने ठाउँतिर गइरहेको बेला एउटा ठूलो सिंह गर्जंदै आउँछ। तर शिमशोनले त्यो सिंहलाई आफ्नो हातैले मार्छ। उसले सयौं खराब पलिश्तीहरूलाई पनि मार्छ।
केही समयपछि, शिमशोनले दलीला नाउँ भएकी केटीलाई प्रेम गर्न थाल्छ। दलीलाले शिमशोन किन बलियो भएको हो, पत्ता लगाएर पलिश्तीहरूका मुखियाहरूलाई बताउन सकी भने हरेक मुखियाले उसलाई १,१०० चाँदीका टुक्राहरू दिने भाकल गरेका हुन्छन्। दलीला जम्मै पैसा पाउन खोज्छे। ऊ शिमशोन अथवा परमेश्वरका जनहरूको असल साथी थिइन। यसकारण उसले शिमशोनलाई ऊ कसरी यत्ति बलियो भएको भनेर सोधिरहन्छे।
अन्तमा दलीलाले शिमशोनलाई उसको बलको रहस्य भन्न लगाइछाड्छे। शिमशोनले आफ्नो गुप्त कुरा यसरी बताउँछ: ‘मेरो कपाल कहिल्यै खौरिएको छैन। किनभने म जन्मैदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजिरी हुँ। मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ।’
यो थाह पाएपछि दलीलाले शिमशोनलाई आफ्नो काखमा सुताउँछे। त्यसपछि उसले एक जना मान्छेलाई भित्र बोलाएर शिमशोनको कपाल काट्न लगाउँछे। शिमशोन निद्राबाट उठ्दा त उसको बल गइसकेको हुन्छ। त्यसपछि पलिश्तीहरूले उसलाई पक्रेर लैजान्छन्। उनीहरूले उसका दुवै आँखा निकालिदिन्छन् र उसलाई आफ्नो दास बनाउँछन्।
एकदिन पलिश्तीहरूले दागोन देवताको पूजा गर्न ठूलो भोज लगाउँछन्। शिमशोनलाई गिज्याउन उनीहरूले उसलाई जेलबाट निकालेर ल्याउँछन्। यतिखेरसम्म शिमशोनको कपाल फेरि पलाइसकेको हुन्छ। उसले आफ्नो हात समातेर बाटो देखाइदिने केटोलाई यसो भन्छ: ‘यो घरलाई थाम्ने खम्बाहरू मलाई छाम्न देऊ।’ त्यसपछि शिमशोनले यहोवासित प्रार्थना गरेर बल माग्छ। अनि खम्बाहरूलाई समातेर ऊ यसो भन्दै कराउँछ: ‘मलाई पनि पलिश्तीहरूसँगै मर्न दिनुहोस्।’ त्यतिखेर भोज मनाउन भनेर ३,००० पलिश्तीहरू भेला भएका हुन्छन्। शिमशोनले घोप्टो परेर खम्बाहरूलाई ठेल्दा पूरै घर गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ र घरले थिचेर सबै खराब पलिश्तीहरू मर्छन्।
न्यायकर्त्ता अध्याय १३ देखि १६ सम्म।
संसारकै सबैभन्दा बलियो मान्छेको नाउँ के हो र उसलाई यस्तो बल कसले दिनुभयो?
एक पटक शिमशोनले ठूलो सिंहलाई के गऱ्यो, चित्र हेरेर बताऊ।
चित्रमा शिमशोनले दलीलालाई के गोप्य कुरा बताउँदैछ अनि त्यसपछि शिमशोनलाई पक्रन पलिश्तीहरू कसरी सफल हुन्छन्?
आफू मर्ने दिनमा शिमशोनले कसरी ३,००० पलिश्ती शत्रुहरूलाई मार्छ?
न्यायकर्त्ता १३:१-१४ पढ्नुहोस्।
छोराछोरी हुर्काउने सम्बन्धमा मानोह र उसकी पत्नीले कस्तो राम्रो उदाहरण बसालेका छन्? (न्याय. १३:८; भज. १२७:३; एफि. ६:४)
न्यायकर्त्ता १४:५-९ र १५:९-१६ पढ्नुहोस्।
शिमशोनले सिंहलाई मारेको, आफूलाई बाँधिराखेको नयाँ डोरीहरू चुँडाएको र गधाको बंगराले १,००० मानिसहरूलाई मारेको घटनाहरूबाट यहोवाको पवित्र आत्माले कसरी काम गर्छ, त्यसबारे के सिक्न सक्छौं?
पवित्र आत्माले अहिले हामीलाई कसरी मदत गर्छ? (न्याय. १४:६; १५:१४; जक. ४:६; प्रेरि. ४:३१)
न्यायकर्त्ता १६:१८-३१ पढ्नुहोस्।
खराब संगतले शिमशोनलाई कसरी असर गऱ्यो र यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (न्याय. १६:१८, १९; १ कोरि. १५:३३)